အတ္တမဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ကြေမွသွားသောနှလုံးသားများ | May Zuu - မေဇူး
''သက်မှူး နောက်နေ့တွေ အိမ်လာလည်လို့ ရမလားဟင်"
တိုးတိတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အမေးအဆုံးမှာ တို့ ယောင်ယမ်းပြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်မိတယ်။ နောက်တော့မှ သတိရပြီး "ဘာလုပ်ဖို့လဲ"လိ်ု့ မေးတော့
"သက်မှူးကို ခင်လို့၊ သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်လို့"တဲ့။
ခရစ္စမတ်နေ့မှာတော့ ဘုရားကျောင်းက ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ ကိုခင်ဦးက''နင့်ဆီကို ဧည့်သည် ရောက်နေတယ်"တဲ့။
ထင်မထားမိတဲ့အချိန်မှာ သူ ရောက်လာတဲ့အတွက် ပျော်သွားမိတာကို ဟန်မဆောင်နိုင်ဘူး။ သူ့ အနားကိုရောက်တော့ "Marry Charismas and Happy New Year သက်မှူး" ဆိုပြီး တို့လက်ထဲကို သူ့ဘေးက အထုပ်ကြီး ထည့်ပေး တယ်။
"Chrismas လက်ဆောင် ပေးတာမို့ မငြင်းနဲ့နော် သက်မှူး၊ ကျွန်တော့်ကို ခင်ရင် လက်ခံပါ"တဲ့၊ တို့ မယူမချင်း ပြန်မှာ မဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ အတင်းပေးနေတာမို့ မယူချင် ယူချင်နဲ့ လှမ်းယူလိုက်ရတယ်။
"ဖြေကြည့်နော်" ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့စကားသံကို လိုက်နာစွာနဲ့ အထုပ်ကို ဖြေကြည့်လိုက်တော့ ဖြူဖွေး ဆွတ်နေသော panda အမွေးပွရုပ်ကြီး။ တို့ အရမ်းကို သဘောကျ သွားမိတယ်။ ကြည့်ပါဦး အရုပ်ကြီးက တပွေ့တပိုက်ကြီး ခန္ဓာကိုယ် သေးကွေးလှတဲ့ တို့ရဲ့ တစ်ဝက်လောက် ရှိတယ်။
''ကျွန်တော် သက်မှူးကို စတွေ့တော့ baby doll လေးကို မြင်ရသလိုပဲ။ အထူးသဖြင့် သက်မှူးရဲ့ မျက်လုံးလေး တွေက baby doll မျက်လုံးလေးတွေ အတိုင်းပဲ။ ကြည့်လိုက်ရင် ကလေးလေးနဲ့ အရမ်း တူတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးလေး အတွက် အရုပ်လက်ဆောင် ၀ယ်လာပေးတာ။ ကြိုက်ရဲ့လားဟင်?"
''ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကြီးမှာပေါ့ အားနာ . . . . .''
သူ့ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေ ရှေ့မဆက်အောင် သွယ်ဝိုက်ပြီး တားဖို့ကြိုးစားတိုင်း ''ချစ်ခြင်းနဲ့ လက်ထပ်ခြင်းကို ဘယ်လို နားလည်ထားလဲ။ သက်မှူး" လို့ မေးတတ်ခဲ့တယ်။
နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့''နင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကိ်ု ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်လဲ သတ္တိရှိရှိ ရှေ့တိုးလိုက်၊ နောက် ဆုတ်မယ်ဆိုရင်လဲ ပြတ်ပြတ် သားသား၊ အပြီးသာ ကျောခိုင်းလိုက်တော့။ ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလိုနဲ့ စည်းလည် ခေါင်မှာ ဒီအတိုင်းကြီး ရပ်မနေကြနဲ့" တဲ့လေ။
သူတို့ရဲ့စကားဟာ စေတနာပါမှန်း သိပေမယ့် လိုက်နာဖို့ မလွယ်ဘူး။ ကာယကံရှင်တွေအတွက် တော့ တကယ့်ကို မလူးသာ မလွန့်သာပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လက်ရှိ အခြေအနေကို သည်းမခံနိုင် တော့စွာနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ် ထင်တဲ့ လမ်းတစ်လမ်းကို တို့ ရွေးလိုက်တော့တယ်။ တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် သေချာသွားတဲ့နေ့မှာတော့ သူ့ကို အသိပေးဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း သူ့ကို အတွေ့မှာ ''နိုင့်ကို ပြောစရာရှိတယ်"ဆိုတဲ့ စကားသံနဲ့ထပ်တူ "သက်မှူးကို ပြောစရာရှိတယ်"တဲ့လေ။
''သက်မှူးကို ချစ်တယ်"ဆိုတဲ့ နိဒါန်း မပါတဲ့ သူ့ရဲ့စကားသံဟာ တို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ဆန့်ကျင် တာပါပဲ။
"ဟင့်အင်း၊ မချစ်ရဘူး နိုင်၊ နောက်ပြီး မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ သက်မှူး ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတာကလည်း ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ။ သက်မှူး ပြောချင်တာက ခုထဲက တို့တတွေရဲ့ ခင်မင်မှုကို ရပ်ဖို့ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံး ၀မ်းနည်း ကြေကွဲစွာခံစားရမယ့် အလုပ်မျိုးကို အစထဲက မလုပ်ကြရင် အကောင်းဆုံး မဟုတ်လား။ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိရက်နဲ့ ရှေ့မဆက်ချင်ပါနဲ့ကွာ"
''သက်မှူးကို လက်ထပ်ခွင့် မရတာနဲ့ တို့ မချစ်ရတော့ဘူးလား။ ချစ်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလား။ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိပေမယ့် တို့ရင်ထဲက ချစ်ခြင်းကိုတော့ တားလို့ မရခဲ့ဘူး။ တို့ကို မချစ်ပါနဲ့လို့ မတားပါနဲ့ သက်မှူးရယ်။ သက်မှူး ပြန်မချစ်ရင်လည်း နေပါ။ ကိုယ်က ချစ်နေခွင့်လေး ရရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်က ခင်မင်လက်စလေးကိုတော့ မေ့မပစ်လိုက်ပါနဲ့ သက်မှူးရယ်။ တို့ သက်မှူးကို မခွဲနိုင်ဘူး"
"အဲဒါ ပြောတာပေါ့ နိုင်ရယ် သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တောင် မခွဲနိုင်တာ။ ချစ်သူဖြစ်ရင် ပိုပြီး ဆိုးတော့မှာ ပေါ့။ နောက်ပြီး သက်မှူး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်ပြီးတော့မှ မခွဲချင်ဘူးလေ။"
"သက်မှူးစကားက တို့ကို ချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မညာပါနဲ့ သက်မှူးရယ်၊ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အသိတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေပေမဲ့ သက်မှူး နှလုံးသားကတော့ ချစ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ သက်မှူး မျက်လုံးလေးတွေထဲက အရိပ်တွေက ရင်ထဲက ခံစားချက် အစစ်အမှန် တွေပဲလေ။ ဒီတစ်ခါတော့ နှလုံးသား ဆန္ဒကို ဦးစားပေးရအောင် သက်မှူးရယ်နော်။ မောင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောပါအုံး"
ချစ်ကြပြီဆိုတော့လည်း အရုးအမူး၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်စိအောက်က အပျောက် မခံ နိုင်အောင် တတွဲတွဲ မခွဲမခွာ ရှိခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ မောင်ဟာ သူမအတွက် ချစ်သူ တစ်ယောက် အဖြစ်သာမက အစ်ကို တစ်ယောက်လိုရော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လိုပါ အားကိုးစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အစစ အရာရာ အလိုက်သိမှု၊ ဂရုစိုက်မှု၊ လိုအပ်ချက် မှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးမှု၊ အချစ်ကြီးမှုတွေရဲ့ကြားမှာ တို့ နေပျော်ခဲ့ပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ "နိုင်က သက်မှူးကို သိပ်ချစ်တာ"လို့ ပြောသံများကြားမှာ သူမ ချစ်သူရ ကံကောင်းခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူတတ်ခဲ့ပြီ။
"မောင် ချစ်တာ လူတိုင်း သိတယ်တွေ့လား"တဲ့
"မောင့်အိမ်က သက်မှူးနဲ့ မောင့်ကို သဘောမတူတာ တခြား ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာမတူတာ တစ်ခုကြောင့်သာ တားနေကြတာ။ ဒီလိုပါပဲ သက်မှူးအိမ်ကလည်း မောင်နဲ့ သဘောမတူဘူးလို့ ပြောနေကြမှာပဲ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ မောင်တို့ ကြိုသိ ထားပြီးသားပဲလေ။ အဲဒီအတွက်တော့ ထူးပြီး စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ သက်မှူးရယ်။ ဒါသဘာဝပဲ။ ဘယ်မိဘ မဆို ကိုယ့်သားသမီးကို ကောင်းစေချင်ကြတာပဲလေ"
"သက်မှူး မဟုတ်ဘဲ တခြား မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို မောင် ထပ်ချစ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်သလို သက်မှူးကို ပေးတဲ့ အကြင်နာမျိုး၊ သံယောဇဉ်မျိုး၊ ဂရုစိုက်မှုမျိုးကိုလည်း မောင် ဘယ်သူ့ ကို ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဘေဘီလေးရဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သက်မှူးကို ချစ်တဲ့ အချစ်ကြောင့်သာ ဒီအရာတွေ အားလုံး ဟာ ဖန်တီးစရာ မလိုပဲ မောင့်ရင်ထဲက အလိုလို ထွက်လာတာ။ အကြင်နာတို့ မေတ္တာတရားတို့ အချစ်တို့ ဆိုတာ ဖန်တီးလို့ မရပါဘူး ဘေဘီလေးရယ်"တဲ့။
နောက်ပြီး တို့ငယ်ငယ်လေးထဲက ခုချိန်ထိ လိမ္မာခဲ့သူလေ။ မောင်နှမ၀မ်းကွဲတွေ မောင်နှမအရင်း တွေ အမြဲတမ်း အထင်ကြီး လေးစားခြင်းကို ခံရတဲ့သူ။ အငယ်တွေအတွက် ရှေ့ဆောင် လမ်းပြဖြစ်အောင် အမြဲတမ်း ထူးချွန်ထက်မြက်အောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ - အမျိုးတွေကြားထဲမှာ
"သူ့လို လိမ္မာအောင်နေ"လို့ အမြဲတမ်း စံပြု ချီးမွမ်း ခံခဲ့တဲ့သူ၊ အဲဒီလို အပြောတွေကိုလည်း သာယာ တတ်ခဲ့သူ၊ အဲဒီလိုမျိုး တစ်ချိန်လုံး လိမ္မာခဲ့တဲ့၊ မိဘက ကိုယ့်အတွက် အမြဲ ဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့ သမီး လိမ္မာ တစ်ယောက်ဘ၀ကနေ မိဘစကားကို နားမထောင်ဘဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဇွတ်မိုက်လိုက်ဖို့ ကိုယ့်မှာ သတ္တိ နည်းခဲ့တာလဲ အမှန်ပါပဲ မောင်ရယ်။ ဒါဟာလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်ခြင်း အတ္တ တစ်မျိုးပါပဲလေ။
မောင်ရေ တို့တတွေ ဆွေးနွေးကြရအောင်။ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ မောင့်မှာလည်း တို့ကို ဆွေးနွေးစရာ ရှိနေခဲ့သတဲ့။ ဟိုတစ်ခါကလို တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် -
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ လောကကြီးမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တချို့ဟာ မယုံနိုင်စရာ ကောင်း လောက်အောင် အတွေ့အကောက် တိမ်းဝှက်မှုတွေနဲ့ရယ်လေ။ ကြိုမမြင်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်နော်။ မောင်လည်း အိမ်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးပြီတဲ့။ မောင့်မှာလည်း ငဲ့ညာစရာတွေနဲ့ပါလား။ မောင့် အိမ်မှာလည်း မောင် ဟာ မရှိမဖြစ် Essentialတဲ့လား။ မောင်ဟာလည်း ''သားလိမ္မာ"ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးအောက်က ရုန်းမထွက် နိုင်ခဲ့ဘူးနော်။
သင့်တော်လို့ စီစဉ်တာဆိုတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ စီမံမှုအောက်မှာ ''သားလိမ္မာ''၊ ''သမီး လိမ္မာ''ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လှလှလေးတွေ အောက်မှာ အသည်းနှလုံးတွေ ကြေမွ သွားခဲ့ပြီ။ နှလုံးသားက နာကျင်စွာ ငိုကြွေး နေတာကို ဘယ်သူ ကြားနိုင် သိနိုင်မှာတဲ့လဲ။ ချစ်တတ်တဲ့ တို့နှစ်ယောက်ပဲ သိနိုင်လိမ့်မယ်နော်။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသွေးတွေ ရင်းပြီး ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းမှာတော့ အပြုံးတစ်ခုကို ဟန်ဆောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တပ်ဆင် ထားရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလည်း နောင်တစ်ချိန်မှာ ကလေးတွေကို ဥပမာပြု ဆုံးမစရာ မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောနိုင် ဘူးလေ။
''သက်မှူးတို့များ လိမ္မာလိုက်တာ၊ ချစ်သူရှိတာတောင် မိဘ သဘောမတူလို့ စွန့်လွှတ်ပြီး အိမ်က သဘောတူသူကို ပဲ ယူရှာတယ်''လို့ ပြောကောင်း ပြောနေကြဦးမှာပါ။
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ မြင်ကွင်း မဂ္ဂဇင်း